Mbira – World Music – the Music Journey
Music from Zimbabwe – Thomas Mapfumo
As you know, the Mbira is one of the most exciting instruments for me: just a little finger-piano with great sounds. And one of its maestro’s is the Zimbabwean musician Thomas Mapfumo. Here’s his nice song “Nyama Yekugocha”:
Listen to Shumba
Posted on May 29, 2012 May 29, 2012 by XandiPosted in Africa, World, ZimbabweTagged 2012, culture, Mbira, mbira blog, news, piano, Thomas Mapfumo wikiThomas Mapfumo, Thomas MapfumoThomas Mapfumo, world music, wThomas Mapfumo, Zimbabwe. 2 Comments
Music from Zimbabwe – Ephat Mujuru
Ephat Mujuru(1950-2001), was a zimbabwean musician and mbira maestro. Here’s his nice song “Africa meet Africa”:
Posted on May 16, 2012 May 15, 2012 by XandiPosted in Africa, World, ZimbabweTagged Africa, africa meets africa, culture, entertainment, Ephat Mujuru, Ephat Mujuru 2012, Ephat Mujuru wiki, Mbira, mbira blog, peace, world music, Zimbabwe. 1 Comment
Music from Zimbabwe – Edwin Hama
Edwin Hame and his great song “Dreams of a Home”:
Posted on May 2, 2012 May 1, 2012 by XandiPosted in Africa, World, ZimbabweTagged Africa, culture, Edwin Hama, Edwin Hama wiki, Frica, Mbira, Music, news, travel, travela, world music, Zimbabwe. 2 Comments
Music from Zimbabwe – Simon Mashoko
Simon Mashoko was a zimbabwean mbira player. Here’s his nice song “Kumakudo”:
Posted on April 9, 2012 April 5, 2012 by XandiPosted in Africa, World, ZimbabweTagged Africa, culture, entertainment, Mbira, mbira blog, mbira music, Music, news, rip, Simon Mashoko, Simon Mashoko wiki, travek, Zimbabwe. 1 Comment